NSGIC dia nanambara ny mpikambana vaovao ao amin'ny birao - Geofumadas
NSGIC dia manambara mpikambana vaovao ao amin'ny birao
Desambra, 2020 jeospatial - GIS
Ny National States Geographic Information Council (NSGIC) dia manambara ny fanendrena mpikambana vaovao dimy ho ao amin'ny filankevi-pitantanana azy, ary koa ny lisitr'ireo manamboninahitra sy mpikambana ao amin'ny Birao mandritra ny taona 2020-2021.
Frank Winters (NY) dia filoha voafidy handray ny toeran'ny fiadidian'ny NSGIC, maka an'i Karen Rogers (WY). Frank dia talen'ny Executive of the New York State Geospatial Committee Committee. Frank dia manana Master of Science in Geography avy amin'ny University of Idaho ary efa niaraka tamin'ny GIS tao amin'ny governemanta New York State nandritra ny 29 taona.
Ny filoha NSGIC vaovao Frank Winters dia nanonona tamin'ny fanambarana an-gazety fa ny areti-mifindra COVID-19 dia namorona fanamby vaovao lehibe ho an'ny fireneny ary nanasongadina ny filàna ny fandrindrana sy ny fampiasam-bola mitohy amin'ny angon-drakitra sy teknolojia ary ny mpiasa. Faly izy fa afaka manompo ny fianakaviany NSGIC amin'ny maha filoham-pirenena azy. Matoky izy fa ny vondrom-piarahamonina ara-jeôgrafia ao amin'ny firenena dia hanana anjara toerana lehibe kokoa amin'ny fanamby ho avy.
Jenna Leveille (AZ) dia voafidy ho filoham-pirenena ho an'ny talen'ny talen'ny 2020-21. Nahazo diplaoma tao amin'ny Oniversiten'i Oregon State ary niasa tao amin'ny Departemantan'ny Tany Arizona (ASLD) nandritra ny roa ambin'ny folo taona, Jenna dia 15 taona niainany GIS. Mpanadihady zoky GIS zokiny izy ary mpitarika ny tetik'asa ao amin'ny Departemantan'ny Fanjakan'ny Tany Arizona. Toy izany koa, izy dia niasa ho toy ny Representative of the State of Arizona to the NSGIC hatramin'ny 2017.
Megan Compton (IN), Indiana Geographic Information Officer, dia voafidy ho talen'ny. Megan dia mitantana ny Office of Geographic Information Indiana ary manome fanaraha-maso stratejika ny portfolio teknolojia GIS an'ny fanjakana ary koa ny fitarihana ny fitantanana GIS ho an'ny fanjakan'ny Indiana. Nandray anjara tamin'ny tetikasa GIS sy ny fisoratana anarana izy hatramin'ny nahazoany MPA avy tao amin'ny Indiana University tamin'ny 2008.
Jonathan Duran (AZ), voafidy indray tao amin'ny filankevi-pitantanana, dia niditra ho mpikambana ao amin'ny birao GIS Arkansas ho mpandalina GIS tamin'ny taona 2010 mba hanohanana ny fampandrosoana sy ny fikojakojana ireo programa momba ny angon-drakitra, indrindra ireo afovoan'ny arabe sy ireo teboka fitarihana. . Tamin'ny volana oktobra 2016 dia nasandratra ho Tale lefitra izy ary nanampy tamin'ny fitantanana ny tetikasa, ary koa ny asa aman-draharaha sy ny fandaminana stratejika ataon'ny masoivoho isan'andro. Jonathan dia nanao fanazaran-tena sy nianatra GIS efa ho 20 taona izao.
Mark Yacucci (IL), Lehiben'ny Fizarana Fampahalalam-baovao momba ny Geosains ao amin'ny Survey State Geological Survey (ISGS), dia voafidy ho filankevi-pitantanana ihany koa. Mark dia mandrindra ny fitantanana ny angona sy ny fizarana manerana ny ISGS ary manara-maso ny fampandrosoana ny Illinois Geospatial Data Clearinghouse, ny Illinois Height Modernization Program (ao anatin'izany ny fahazoana LIDAR ho an'ny fanjakana), ny Unit Records fandrindrana ny fenitra ara-jeolojika sy sarintany.
Previous Post«Previous Nanaovan'i Esri sonia ny fifanarahana fahatakarana niaraka tamin'ny UN-Habitat
Next Post Geomoments - Fihetseham-po sy Toerana ao anaty fampiharana iraymanaraka »
Mametraha valiny Hanafoana valiny
Ny adiresy email dia tsy ho namoaka.
Inona ireo fandrindrana Cartesian?
Nahoana ianao no tokony hanafina ny IP-nao?
Hatraiza ny halavitry ny tany amin'ny masoandro?
Inona no maha samy hafa ny orthophotos, orthophotomaps, orthomosaics, ary ny orthophotos marina?